Sidee bilaash loogu daawadaa kubada cagta | Androidsis
Pablo Aparicio | | Codsiyada Android, Streaming, Khiyaamada Android, Tababarada
Dhawr sano ka hor, telefishannada gobolka Isbaanishku waxay dooran karaan kulanka horyaal ee la bixinayo toddobaad kasta. Sannadahaas (cajiibka ah) waxaan hubin karnay in haddii qaab cayaareed ama ciyaar xiiso leh la ciyaaro, aan ku arki lahayn ciyaartaas bannaan. Hadda ciyaar furan oo toddobaadle ah ayaa sidoo kale la bixiyaa, laakiin tani badiyaa maahan, illaa iyo hadda, ciyaarta ugu fiican ee usbuuca. Inaad awood u yeelato inaad aragto cayaaraha xiisaha badan ee aan bixinayno, ama taasi waa aragtida; awoodo bilaash ka daawo kubada cagta siyaabo badan.
Waxaa jira codsiyo badan oo xiise leh oo noo oggolaan doona inaan kubbada cagta ku daawanno bilaash qalabkeena Android, laakiin waxa xun ayaa ah inay adeegsadaan liisas ama nidaamyo joojiya shaqada waqti ka waqti. Maqaalkani waxaan ka hadli doonnaa dhowr ka mid ah codsiyadaas, in kasta oo waxa kaliya ee aan kuu ballanqaadi karno ay tahay in dhammaantood ay joojin doonaan shaqada mustaqbalka, waxaan rajeynayaa meel fog. Waxaan bilaabi doonnaa inaan ka hadalno TV España + Fútbol, ​​laga yaabee kan ugu ballanqaadka badan.
???? Isku day bil bilaash ah: Ka hel bil bilaash ah kubada cagta DAZN oo aan lahayn wax ballanqaad ah riix halkan
1 Kubadda cagta ku daawan TV-ga Spain + Kubadda Cagta
2 Sida loo soo dejiyo loona rakibo TV España + Fútbol
Kubadda cagta ku daawan TV-ga Spain + Kubadda Cagta
Muxuu TV España + Fútbol na siiyaa? Hagaag, sida magaceeda ka muuqata, codsigan waxaan ku daawan karnaa kanaalada kubada cagta. Si aad u sii cayiman, waxa ay na siiso waa fiiri dhammaan kanaallada TV-ga Spain, kuwaas oo ay ka mid yihiin kanaalada kubada cagta ee laga sii daayo boqorka isboortiga Spain.
Marka hore, codsigan ayaa naga caawin doona inaan kubbada cagta ka daawano qalabkeena Android, laakiin waxaan ka turjumi karnaa dhammaan waxyaabaha ku jira Chromecast ama qalab / nidaam la jaan qaadi kara si aad uga daawato telefishanka qolkayaga.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo TV España + Fútbol
Sida barnaamijyada badankood ee noocan ah ee mudan, waxaan u baahanahay inaan kala soo baxno barnaamijka .apk meel ka baxsan Google Play, taas oo macnaheedu yahay rakibisteedu ma sahlana sida nidaamka rasmiga ahi u yahay. Si looga fogaado jahwareerka, waxaan kuu sharaxeynaa talaabooyinka la raacayo:
Laga soo bilaabo aaladdayada 'Android', waxaan ka furaneynaa shabakad internet oo noo oggolaaneysa inaan soo dejino faylasha.
Waxaan helnaa LINKAN.
Waxaan taabaneynaa «Ku soo degso biraawsarka». Maaddaama ay ku jirto MEGA, soo dejintu way dhici kartaa, taas oo markaa aan ku soo dejineyno faylka kumbuyuutar oo u dirno qalabkeena Android boostada, tusaale ahaan.
Faylka .apk ee aaladdayada 'Android', ayaan ku socodsiineynaa.
Waxay u badan tahay, waxay nooga digi doontaa inaan curyaaminay ikhtiyaarka ah inaan ku rakibno softiweer ilo aan la garanayn. Hadday xaaladdu sidaas tahay, waa inaannu hawlgelinnaa, oo aannu ka samayn karnaa isla daaqadda digniinta ah ama waxay si toos ah noo geyn doontaa goobaha, waanu dhaqaajin doonnaa ikhtiyaarka oo wuxuu bilaabi doonaa inuu rakibo.
Waxaan u siineynaa inay ku rakibaan, waan aqbalnaa ogeysiisyada waana sugeynaa.
Hadda waa inaad doorataa kanaal iyo barnaamij si aad u daawato. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan doorano biraawsarka kadibna markale biraawsarka ama barnaamijka fiidiyowga asalka ah ee qalabka. Haddii tani shaqeyn weydo, waa inaad tijaabisaa nidaam shaqeynaya. Kanaallada badanaa way shaqeeyaan. Hoos waxaad sidoo kale ku leedahay fiidiyow sharrax ah.
Sidii aan kuugu sheegay bilowga qoraalkan, waxay u badan tahay in badan oo ka mid ah codsiyada noo oggolaanaya inaan kubbada ku daawanno bilaash qalabkeena Android inay joojin doonaan shaqada waqti uun mustaqbalka. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, laga yaabee tan ugu fiican ayaa ah ha iloobin hababkii hore. Muddo dheer oo aanan xitaa ogeyn goorta aan hadlayno waxaa jiray adeegyo sida Justin TV ama Ustream, isla kuwaa oo inta badan laga sii daayo boggaga internetka sida caanka ah ee Roja Directa. Waxaan marwalba raadin karnaa codsiyada rasmiga ah ee noocan ah websaydhka, ama isticmaalnaa mid guud.
Codsiga aan tilmaamayo ayaa ah Livestream, taas oo lagu qeexi karo inay tahay Periscope laakiin taasi uma baahna in fiidiyowga lagu duubo aalad mobiil ah, taas oo ah, isticmaale kasta oo dunida ku nool wuxuu baahin karaa waxa ay ka daawanayaan TV-yadooda inta kalena waxaan arki lahayn tayo sare
Fikradda waa in la raadiyo dhacdo gaar ah markaan rabno inaan ciyaar aragno. Fudud, laakiin wax ku ool ah munaasabado badan. Iyo tan ugu fiican dhammaanteed, waxaan u isticmaali karnaa aaladaha Android iyo ficil ahaan qalab kasta oo kale oo leh nidaam hawlgal.
Wiseplay waa codsi aan ku arki karno liisaska kanaalka, oo leh qaybaheeda togan iyo kuwa taban: qaybta togan ayaa ah inaan ka heli karno liisas leh kanaallo badan, oo ay ku jiraan qaar aan shuqul ku lahayn daawashada kubbadda cagta lacag la’aan. Qaybta taban waxay tahay inaan ku baadho liisaska khadka tooska ah mararka qaarkoodna ma sahlana in la helo. Dabcan, haddii aan iyaga helno waxaan ku raaxeysan doonnaa kubadda cagta ugu fiican iyo kanaalo kale oo gebi ahaanba bilaash ah.
Ha iloobin inaad soo dejiso liisaska kubbadda cagta wiseplay inaad awood u yeelatid inaad aragto dhammaan dhacdooyinka isboorti ee ugu muhiimsan: kuwa soo jireenka ah, kulamada derbiga, finalka iyo waxyaabo kale oo badan.
Codsi kale oo la mid ah wax kasta oo TV España + Fútbol ah ayaa ah FreeDirect. Waxay la mid tahay maxaa yeelay kama heli doonno Google Play, way la mid tahay maxaa yeelay waa inaan dhaqaajino ikhtiyaarka ah inaan ku rakibno codsiyada laga helo ilo aan la garanayn waana la mid tahay maxaa yeelay waxaan yeelan doonnaa wadiiqooyin badan oo aan kala dooranno, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay uma fiicna sida ugu horreysa ee xulashooyinka aan uga hadli doonno qoraalkan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa habboon in la rakibo. Waan kala soo dagi karnaa CADADKA.
Waxaanuna ku dambaynaynaa Channel P Premium, ikhtiyaar aad u wanaagsan oo ah laga heli karo Aptoide, tusaale ahaan. Laakiin ka taxaddar, waa inaad tixgelisaa dhowr waxyaalood: waa inaad doorataa nooca gonzalo-rodriguez, kaas oo aan ka daawan karno kanaalo badan oo lacag lagu bixiyo. Ikhtiyaarrada kale ma ahan kuwo aamin ah. Dhanka kale, waxaa habboon in la daawado waxyaabaha ku jira aaladda horteeda, maadaama waqti ka waqti ay xayaysiinta qaar u muuqdaan shaashad buuxda. Sideedaba, waa ikhtiyaar kale oo mudan in laga fiirsado.
Kuwaani waxay ahaayeen soo jeedinteenii oo kuu oggolaan doonta inaad kubbadda cagta ku daawato bilaash qalab Android ah. Ma dooneyn inaan sagootino annaga oo taa ka hadal qof walba waa inuu mas'uul ka noqdaa ficilkiisa haddii ay go'aansadaan inay ku rakibaan barnaamijyo laga soo dejiyey meel ka baxsan Google Play. Waxba badanaa ma dhacaan, laakiin marwalba waxaan ka heli karnaa .apk lambarka wax laga beddelay oo aan la yaabno wax xun.
Codsiyada hore midkoodna miyuu kaa caawiyay? Haddii aad halkaan ka timid oo aadan weli haysan waddo aad si bilaash ah kubbadda cagta ugu daawato, xusuusnow taas dhiirrigelintan waxaad ku raaxeysan kartaa DAZN hal bil oo bilaash ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Streaming » Sida loogu daawado kubada cagta bilaash iyo dhamaan kanaalada TV-yada ee Spain IT SHAQO !!
Xidhiidhkaaga ayaan ku helayaa fayras
Ku jawaab Alberto Martin Hernandez
Maqaal weyn. Kanaallada la socda Live Stream Player waa kuwo aniga ii fiican, laakiin kuwa UC Browser midna ma shaqeeyaan. Waxaan ku rakibey nooca loo yaqaan 'UC Browser version' kiniin ahaan (maadaama aan ku isticmaalo aaladda noocan ah) maxaa yeelay midka horay loo sii dejiyey ee TV-ga España + Fútbol uusan ku habboonayn. Xal kasta? Aad baad u mahadsantahay.
Ku jawaab Benalmadelman
Si dagan ugu degso in aysan virus aheyn. Shaqsiyan waanu tijaabinay.
Iima oggolaaneyso inaan helo xiriirin waxayna toos iigu dirtaa dukaanka ciyaarta si aan u soo dejiyo MEGA markii aan dhowr jeer isku dayayna waxaan helay fayraska
Bal u fiirso tan waxaadna ogaan doontaa sida looga soo dejiyo faylasha Mega. https://www.androidsis.com/truco-android-como-descargar-contenido-alojado-en-mega-sin-tener-instalada-la-aplicacion-para-android/
Haa mahadsanid hadda haa
Kawaran hadaan dhaho waxaan qabaa virus, ma waxaad iigu jawaabtaa fariinteydii hore?
Markaad iskudayeyso inaad rakibto waxay dhahdaa rakibis ka dibna ... Codsi lama rakibin
Miyaanay lahayn kuwii Mexico ka yimid ?? 🙂
Jawaab Roman Cesar Castillo Gaytan
Kani waa furin. Waxaad kasbatay unfollow.
Jawaab Aurelio Picón López
Ma jiro saaxiib malware.
Si toos ah uma aha arjiga, laakiin xiriiriyeyaasha ku dhex jira arjiga si loo arko kanaallada ayaa ah buul ka mid ah miinooyinka. Horaad ii lumisay, laakiin talo intaanan tagin, isku dayaya inaad iska ilaaliso waxyaabaha noocan ah kama caawinayso sawirkaaga, illaa aad adigu ka mid tahay kuwa ka faa'iideysanaya xiriiriyahan ...
UC Browser waxay ku rakibtaa wax kasta oo ay rabto terminal-ka, oo ay ku jiraan bar baaris iyo facebook, shaqsi ahaan uma maleynayo inay leedahay wax fayras ah, laakiin waa codsi fara-gelin ah.
Marka laga hadlayo arjiga laftiisa si loo daawado kubada cagta, xaqiiqda ah inay sidaas ku sameyso bogagga shabakadda waxay kaa dhigeysaa inaad ka boodeyso bogag xayeysiis ah oo aan tiro lahayn oo dhammaan xiriiriyeyaasha kanaalku aysan shaqeynin. Waan ku qiimeeyaa codsigan si taban anigoo u danaynaya kuwa kale oo aad u xasiloon.
Ka dib laba faallooyin aan jawaab lahayn, ma haysto wax aan ka ahayn inaan ku dhaqmo oo aan joojiyo wadaagista iyo ku talinta boggan. Iyada oo sida ugu fudud ee ay ahaan laheyd in la sameeyo faallo sida "Waan ka xunnahay, laakiin ma ogin sida loo xalliyo dhibaatadaada."
Kaalay, hambalyo wacan qofka maareeya faallooyinka.
Runta saaxiibkay ayaa ah inaanan wax fikrad ah ka haysan faallooyinka aad u jeeddo, waxaan had iyo jeer ka faalloodaa shakiga ama su'aalaha soo ifbaxa, xitaa si ka sii daran munaasabadaha dhibaatooyinka aadka u adag waxaan ku sameeyaa xitaa si gaar ah.
Ma arki karo nova iyo kanaalada qaar waxay u diraan biraawsarkaaga moobilka bog la yiraahdo tutono…. Maxaan sameeyaa si aan mobile-kayga uga arko nova?
Xaaladdaada, si aad u daawato Nova uma baahnid barnaamijkan gabi ahaanba, soo dejiso barnaamijka rasmiga ah ee 'Atresplayer app' waxaadna ka arki doontaa dhammaan barnaamijyada Atresmedia moobaylkaaga, oo ay ku jiraan NOVA:
Waxaad kaloo leedahay barnaamijyo kale sida:
Ku jawaab carles
Hagaag, aniga ... waan ku daalay daawashada kubada cagta si jaclaan ah hadii ay ciyaar muhiim ah tahayna majirto wado lagu arko. Waxaan soo dejiyey Acestream, Sopcast, Xbmc ama Kodi, Ciyaaryahan Splive midkoodna ma jiro waddo si habboon loogu arko. Xitaa yaan la dhihin marka ay tahay ciyaar muhiim ah. Halkaas waad ku shubaysaa Taasi waa sababta aan kubada Movistar ugu dhejiyay Imagenio tan iyo markaasna waxaan joojiyay DHAGAYSIGA CAGAARTA EE RADIO.
Jeex jeebabkaaga in mustaqbalka fog aad caafimaad ku heli doontid.
Waa salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aan ka soo dejisan karo apk tv-ga Spain + kubada cagta mahadsanid
Mr. Francisco Ruiz: Anigu waxaan ahay qof raacsan maalin walba daabacaadahaaga. Waa inaan iraahdaa kama jawaabtid WhatsApp-ka la tilmaamay, su'aasha aan ku weydiiyay waxay aheyd hadii Any Cast lagu rakibay Samsung TV waxaan arki karaa shaashadda moblkeyga oo ah isla nooca sumadda J7 (2016). Ma jiraa App? Hambalyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Jawaab ku sii Andrés Hernández Puche.
Waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan si aan u rakibo TV-ga Spain + kubbada cagta, laakiin ma soo saarto hal kanaal oo kaliya, waxay ii soo dirtaa si aan u furo fiilo! Ma aqaano sababta aan jawaabta u jeclaan lahaa mise waa in barnaamijkan lacag lagu bixiyaa ama wax kale maahan barnaamij bilaash ah sida ay ku sheegaan fiidiyowga sida loo rakibo! Aad ayaan u xumahay si daacadnimo ah ayaan u niyad jabay waxaan u maleeyay inay aniga wax ii tareyso laakiin maya?
Waan ka mahadcelinayaa macluumaadkaaga. Waxay noqon doontaa mid waxtar leh runtii. Salaan
Google waxay soo bandhigeysaa tikniyoolajiyadeeda xiisaha leh si kor loogu qaado sawirrada xallinta hoose